GearBox planeta ho an'ny Slew Drive - reducers, reducers kankana, boaty kankana, boaty planeta, reducers hafainganam-pandeha, variatera, kojakoja helikaly, faribolana kely bevelle, boaty fambolena, kodiarana traktera, girety kamiao, boaty kankana
GearBoxes planeta ho an'ny fiara mandeha
Home / Speed ​​Reducer & Gearbox / PlanetBoxes Planeta ho an'ny Slew Drive
GearBoxes planeta ho an'ny Winch Drive
Hangzhou Ever-Power Transmission Co., Ltd., natsangana tamin'ny taona 1988, dia mpanamboatra matihanina amin'ny karazan-boatin'ny fitaovana planeta rehetra.
Amin'izao fotoana izao, ny masontsivana momba ny boaty fitaovana planeta EP3 Series anay, ny kalesin-tsarimihetsika EP4, ny kapila EP7 Series, ny kodiarana kodiarana EP6, dia mahatratra hatrany amin'ny 10,000 itermia. Ny elanelam-bidin'ny fihenam-bidy dia avy amin'ny 3.3 ~ 9000, ny haavon'ny torque output dia 500 ~ 450000N.m. Mihoatra ny 90% ny vokatra vokarantsika any Etazonia, Eropa, Aostralia, Amerika atsimo, Moyen Orient ary Azia atsimo atsinanana. Ny fametrahana sy ny refin'ny boaty fiasan'ny planeta antsika dia mitovy tanteraka amin'ireo namboarin'ireo mpanamboatra boaty planeta eoropeana sy amerikana fanta-daza. Azo ifanakalozana izy ireo.
Ny orinasa dia manana milina avo lenta maro vita any Taiwan, toy ny foibe fanodinana milina mandeha ho azy, milina fitotoana CNC, masinina niasa CNC ary kojakoja milina CNC sns hahazoana antoka fa avo lenta ireo faritra. Ny mpiasanay rehetra dia niatrika fiofanana matihanina henjana, manana fahaiza-manao sy kalitao tena tsara. Ny orinasa dia mandray ny rafitra fitantanana solosaina maoderina ary nahomby tamin'ny ISO9001: 2000 fanamarinana rafitra kalitao.
Torolàlana avo lenta
Ampirisiho ny Motera Hydraulika
Fanerena ny asa-freins
Fihodinana fampidirana mifanohitra amin'ny fihodinan'ny vokatra.
Ny tahan'ny hafa sy ny karazana fidirana hafa dia azo foronina manokana.